Adora & etc.: ခရီးသွားနောက်ဆက်တွဲနဲ့ BPP Challenge
စာရေးချင်နေတုန်း အမစုချစ်သူက BPP Challenge မှာတတ် လာတဲ့အတွက် အတော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ခရီးကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းဆိုတော့ခရီးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေပဲ ရေးဖြစ်နေမှာကိုတော့ နားလည်ပေးကြပါအုံးနော်။
ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြီး သွားခဲ့တဲ့ခရီးတလျှောက် ကြုံရတဲ့အခက်အခဲနဲနဲကို နောက်များခရီးထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ပြန်သတိထားမိအောင်နဲ့ နှစ်ကုန်ခါနီး ခရီးဝေးသွားကြမဲ့သူတွေကိုလဲ မျှဝေချင်တာပါ။
ကျမခရီးသွားတဲ့အခါ ခရက်ဒစ်ကာဒ်(credit) တခု၊ ဒက်ဘစ် (debit) ကာဒ်လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ဘဏ်ထဲမှာ ငွေရှိမှသုံးလို့ရ တဲ့ ကာဒ်တခု၊ငွေအနည်းငယ်ကလွဲရင် ဘာမှယူမသွားဖြစ်ပါဘူး။ ခရက်ဒစ်ကာဒ်တခုထဲကိုသုံးပြီး ဟိုတယ်၊ လေယာဉ်လက်မှတ် နဲ့ တခြား ကြိုတင်ဝယ်ထားရမဲ့ လက်မှတ်တွေကို ဝယ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကာဒ်တွေအများကြီးသယ်စရာမလိုလို့ ပျောက်မှာပြုမှာလဲမပူရဘူးပေါ့လေ။ ဒီနေရာမှာ ကျမကြုံရတဲ့ ပြသနာကိုပြောပြပါအုံးမယ်။ ခရီးမထွက်ခင် ဘဏ်ကိုသွားပြီး တခြားနိုင်ငံမှာ ကာဒ်သုံးဖို့သွားဖွင့်ပါတယ်။ (အရင်တုန်းကတော့ ဒီလိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ခုမှ လုံခြုံရေးထပ်တိုးတဲ့အနေနဲ့ ဘဏ်ကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကာဒ်သုံးမဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြားရတဲ့သဘောပါ။ အလုပ်နဲနဲပိုပေမဲ့ ကျမကတော့သဘောကျပါတယ်။) သွားဖွင့်ရင်းနဲ့ ကျမကာဒ်ကလေးက ဟောင်းနေတော့ သူများနိုင်ငံမှာသုံးရင်း ကာဒ်က မက်ဂနက်တွေအလုပ်မလုပ်ရင်လို့ တွေးပူပြီး ကာဒ်အသစ်ကလေးလဲခဲ့ပါတယ်။ ကာဒ်အသစ်ကလေးရလို့ပျော်ပြီး ကာဒ်ပေါ်က နံပတ်တွေပြောင်းသွားတာ လုံးလုံးသတိမရပဲ ပထမဆုံးတည်းမဲ့ ဟိုတယ်ကို ညဘက်ကြီးရောက်သွားတော့မှ သိပါတော့တယ်။ နေမဲ့ဟိုတယ်ကို Booking.comကနေ သေသေချာချာ ကြိုဘွတ်ကင်လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ မပူဘူးပေါ့လေ။ ကိုယ့်အတွက်အခန်းက သေချာပြီးသားကို။ ခရက်ဒစ်ကာဒ်နံပတ်ပေးထားပြီးသားမှတ်လား။
ဟိုတယ် ရက်ဆက်ရှင်ရောက်မှ " ငါတို့ checkတာ မင်းရဲ့ကာဒ်က Decline ဖြစ်နေပါတယ်။ သုံးလို့မရပါဘူး။" ဆိုတော့ရင်ထဲမှာ ထူပူသွားတာပဲ။
"....ဒါပေမဲ့ မပူပါနဲ့။ ငါတို့မှာ သုံးယောက်ခန်းရှိပါသေးတယ်။ " အမလေးလေး တော်သေးတာပေါ့။ ဒီအချိန်ကြီးမှ booking cancel ဆိုရင် ဘယ်မှာသွားနေရမှန်းမသိ။ ဈေးကလဲ ပိုပေးချင်ပေးရအုံးမယ်။ ဟိုတယ်ကသဘောကောင်းပေလို့။ အဲဒီအချိန်ထိ ဘာလို့ ကျမကာဒ်ကသုံးမရလဲမသိသေးပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ ဒီကာဒ်နဲ့ဘဲ ဒီbookingကိုလုပ်တာပဲပေါ့။ ဘဏ်လဲ တူတူပဲလေ။ အကောင့်ကလဲအတူတူ။ ပြီးမှ နံပတ်ကွဲတာကို သတိထားမိလို့ အဲဒီကာဒ်နဲ့ booking လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်မှန်သမျှကို ဖုံးခေါ်ပြီး နံပတ်အသစ်နဲ့ ပြန် confirm လုပ်ရတယ်။ ဟိုတယ်တွေအားလုံးကလဲ မင်းရဲ့ကာဒ်ကDecline ဖြစ်နေတာ.. မင်းကို ပြန် confirm လုပ်ဖို့ အီးမေးပို့ထားပါတယ် ဆိုတာကြီးပါပဲ။
ငွေသားအရေးတကြီးလိုတဲ့အခါ ထုပ်သုံးဖို့အတွက် ငွေထုပ်စက်(ATM - automated teller machine ) ဘယ်မှာရှိလဲ ဆိုတာလဲ စုံစမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ခရီးမသွားခင်ဘဏ်ကို ဖုံးဆက်မေးတဲ့အခါ ဘဏ်ကဘယ်လိုငွေထုတ်စက်မျိုးမှာ ငွေထုတ်လို့ရကြောင်းနဲ့တခါထုတ်ရင် ငွေ၅ဒေါ်လာ ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ အင်တာနက်မှာရှာလိုက်တော့ နေမဲ့နေရာနားမှာ ATM တလုံး နီးနီးနားနားလဲရှိပြန် ငွေသားများများလဲ မသယ်ချင်ဆိုတော့ ဟုတ်ပြီပေါ့။ ဟိုရောက်မှပဲ တခါထဲအပြီး ၅ဒေါ်လာ ပေးပြီးထုတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့။ တကယ်တမ်း သွားပြီးပိုက်ဆံထုတ်တဲ့အခါ တခါထုတ်၂၀၀ပဲ ထုတ်လို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ၅၀၀ထုတ်ချင်ရင် ၃၀ဒေါ်လာအပိုပေးရပါမယ်။ ဒီပိုက်ဆံက ဘဏ်ကယူတဲ့ အိတ်ချိန်းရိတ် (exchange rate) အပြင်ထပ်ပေးရတဲ့ ပိုက်ဆံပါ။ ကျမကိုယ့်ဘာကိုယ် အကြံပိုင်လှပြီအထင်နဲ့ဟုတ်နေတာ ATM စက်ရှေ့ရောက်မှ ငါဒါတွေကို သေသေချာချာမစုံစမ်းခဲ့လေချင်းလို့ နောင်တရပါတယ်။
Free & Easy သွားကြမဲ့သူတွေအတွက် နောက်တခုအရေးကြီးတာက လမ်းပေါ်မှာကြာမဲ့အချိန်ကိုပိုပိုသာသာ ကြိုတွက်ထားဖို့ပါ။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ကနေပြီး ဘယ်လိုသွားမယ် ဘယ်လောက်ပဲနေမယ် ဆိုပြီး ဘယ်လောက်ပဲကြိုစီစဉ်၊စီစဉ် ထင်ထားတာထက်ကို နှစ်နာရီလောက် အသာလေးပိုကြာပါတယ်။ road trip သွားကြမယ်ဆိုရင်တောင် ဆီဖြည့်ဖို့ရပ်တာတွေ၊ အပေါ့အပါးကိစ္စအတွက်ရပ်တာတွေအပြင် တနေရာနဲ့တနေရာ မောင်းခွင့်သက်မှတ်ထားတဲ့ မိုင်အရေအတွက်မတူတာမို့လို့ လမ်းပေါ်မှာကြာမဲ့အချိန်ကိုပိုပိုသာသာ တွက်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ လမ်းတဝက်မှာ ညအိပ်ဖို့လိုရင် ဟိုတယ်တွေ၊ စားစရာတွေ ကြိုစီစဉ်နိုင်အောင်လို့ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ခရီးမှာ အလွန်ဆုံး၉နာရီပဲ ကြာမယ်လို့တွက်ထားတဲ့ခရီး ဘယ်မှာမှ ကြာကြာမနား၊ မရပ်ပဲနဲ့ ၁၂နာရီကြာခဲ့တာမို့ ည၉နာရီကျော်အထိ ညစာမစားရပဲ ကားပေါ်မှာ ဗိုက်ဆာခဲ့ရတာအမှတ်တရပါပဲ။
ကျမလို ဗိုက်ဆာတတ်တဲ့သူများအဖို့ ခရီးထွက်ရင် မနက်စာကိုကောင်းကောင်းစားကြဖို့လဲ ဆရာလုပ်ချင်ပါတယ်။ ဟိုတယ်က မနက်စာပါရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။ မပါရင်လဲ အချိန်ယူပြီးမနက်စာကိုတနေရာမှာ စားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟိုနေရာသွား ဒီနေရာလည်နဲ့ နေ့လည်စာကမသေချာလို့ပါ။ အထူးသဖြင့် စင်ကာပူမှာသွားလေရာနေရာ အစားအသောက်နဲ့ ဝယ်ဖို့ခြမ်းဖို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးက လာတဲ့ကျမအဖို့ စားဖို့သောက်ဖို့အရေးကို အစက ဒီလောက်တွေးမထားမိပါဘူး။မနက်စာဆို ကော်ဖီတခွက်၊ မုန့်တခုလောက်ပဲစားတတ်တာဆိုတော့ နေ့လည်၁၂နာရီ နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်တဲ့အခါ ဗိုက်တွေကဆာ၊နီးနီးနားနားမှာ ကောင်းကောင်းစားဖို့ဆိုင်က မရှိ။ ရှေ့ပိုင်း တရက်၊ နှစ်ရက် ဗိုက်ဆာလွန်းတဲ့အခါ ကြုံရာ မုန့်တခုခု ဒါမှမဟုတ် ပေါင်မုန့်အသားညှပ်တချပ်နဲ့ ဗိုက်ဖြည့် ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာ မနက်စာကို သတိထားပြီးများများစားနိုင်သလောက်စားထားပြီး ညနေ ၃၊၄နာရီမှ နေ့လည်စာကို ကိုယ်စားချင်တဲ့နေရာမှာစားဖြစ်ပါတော့တယ်။
နောက်တခုက ခရီးဝေးဝေးသွားတဲ့သူတွေဖြစ်တတ်တဲ့ နေ့နဲ့ညမှားတတ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ကိုယ်ပုံမှန် အိပ်ချိန်အိပ်လို့မရဘဲ လင်းလင်းထင်းထင်း နေ့လည်အချိန်ကြီးဖြစ်နေလို့ ပင်ပန်း၊ ကိုယ်နိုးနိုးကြားကြား လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်တဲ့အချိန် ကိုယ်သွားတဲ့နိုင်ငံမှာ ဆိုင်တွေပိတ်တဲ့ အိပ်ချိန်ဖြစ်နေလို့ စိတ်တွေတိုမဖြစ်ရလေအောင် လေယာဉ်ပေါ်စတက်ကတည်းက နာရီကို သွားမဲ့နေရာရဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ထားပြီး အိပ်ချိန်ဆိုရအောင်အိပ်၊ နေ့လယ်ခင်းအချိန်တွေဆို လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်တွေ တကားပြီးတကားထိုင်ကြည့်၊ မုန့်တွေစားပြီး မအိပ်သွားအောင်နေပါ။ ဒါဆို ခရီးအဆုံးရောက်တဲ့အခါ နေ့နဲ့ညမှားတာ သက်သာပါတယ်။ တချို့တွေကတော့ ခရီးမသွားခင် ၂ရက်လောက်အလိုကတည်းကစပြီး အကျင့်လုပ်ကြပါတယ်။ Adora တို့လို အလုပ်တဖက်နဲ့ ကျင့်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့ သူများကျတော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာပဲ နေ့နဲ့ညကို ပြောင်းယူရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတခုအရေးကြီးလှတယ်မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်သွားမဲ့နေရာရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားကို အနည်းငယ်ဖြစ်ဖြစ်တတ်ထားရင်ကောင်းပါတယ်။ ခုခေတ်ကြီးမှာ ကျောင်းတွေမှာလဲ မိခင်ဘာသာစကားအပြင် တခြားနှစ်သက်ရာဘာသာစကားတခုကို သင်ခွင့်ရနေပြီဆိုတော့ တကယ်လို့များ ကိုယ်က တခြားဘာသာတခုကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိထားရင် လေ့ကျင့်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ကျမတို့မြန်မာပြည်ကို လာလည်ကြတဲ့ အနောက်နိုင်ငံသားတွေ မြန်မာလိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ ကျမတို့သဘောကျသလိုပါပဲ။ တချို့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဆို သွားရင်းလာရင်း အကူအညီလိုတဲ့အခါ သူတို့နိုင်ငံသားတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုချည်းပဲ မေးတာထက် သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ အရင်ကြိုးစားပြီး နှုတ်ဆက် စကားပြောတဲ့အခါ ပိုပြီးကူညီကြတယ်လို့ ကြားဘူးပါတယ်။ လောလောလတ်လတ်ပြန်လာတဲ့ ခရီးမှာတော့ ကျမရဲ့ ညီမတဝမ်းကွဲလေးက စပိန်ဘာသာစကားတတ်တာကြောင့် စပိန်ဘာသာစကားပြောတဲ့ ဆိုင်ရှင်တွေနဲ့တွေ့တိုင်းလေပေးတွေဖြောင့်ပြီးကျမတို့တွေ ဝယ်တဲ့ဆိုင်တိုင်း သူလက်ဆောင်တွေရပြီး အလုပ်ကိုဖြစ်လို့။
အခုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲ ဆရာလုပ်တာရပ်ပါရစေ။နောက်တခေါက်မှ ကိုညီလင်းသစ်တို့ အမသက်ဝေတို့လို ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေကို ဓာတ်ပုံတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ လှလှပပရေးတတ်အောင်ကြိုးစားပါအုံးမယ်။
မှတ်မှတ်ရရ တဂ်လာတဲ့ အမ စုချစ်သူကိုလဲ ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ။
BPP Challenge စည်းကမ်းအရ တဂ်ရမယ်ဆိုရင် ရသစာတွေအရေးကောင်းတဲ့ အမ မြတ်ပန်းနွယ်နဲ့ ရွှေအိမ်စည်ကို တဂ်ချင်ပါတယ်။ အမရှင်လေးရဲ့ စာတွေလဲဖတ်ချင်ပါတယ်။ ရေးပြီးသွားကြပြီလားတောင်မသိဘူးနော်။
Posted by Adora etc. at 18:39
စုချစ် 23 September 2014 at 18:30
ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် ညီမလေး Adora ရေ...
ခရီးသွားရတာ ပျော်စရာကြီးနော်... ဓါတ်ပုံလေးတွေလဲ တင်ပါဦး...
အစ်မကတော့ Thank you တစ်ခုပဲ ဘာသာတော်တော်များများနဲ့ ပြောတတ်တယ်... ဟီး...
ရွှေအိမ်စည်မေ 30 September 2014 at 09:46
Adora တဂ်တာကို ပထမပို့စ်ကတည်းက မန့်မှာ ဖတ်မိလိုက်ပါတယ်..။ ဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ reply သေချာပြန်လို့မရလို့ မပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး..။ BPP က နှစ်ပတ်အတွင်းဆိုတော့ မီဦးမှာပါ.။ ရေးပေးမယ်နော် ..။ နောက်ထပ်တင်တဲ့ ပို့စ်က အသစ်ရေးတာမဟုတ်ဘဲ အဟောင်းကိုပြန်ရိုက်တင်တာမို့ လူလည်မလုပ်ချင်တာနဲ့ တဂ်ပို့စ် မလုပ်လိုက်တာပါ..။ အသစ်ရေးပေးမယ်နော်..။
ဒါနဲ့ Adora ရဲ့ ဘလော့ဂ်နောက်ခံ စာဖတ်လို့အဆင်ပြေအောင် တစ်ခုခုပြောင်းပါလားဟင်..။
အခု စာတွေကို select လုပ် ဖတ်နေရတယ်..။ :))